အိန္ဒိယအမျိုးသားလုံခြုံရေးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်က ဥပဒေကြောင်းအာမခံချက် ပေးပြီးသည့်တိုင် နယူးဒေလီ ၃-နေရာ၌ မငြိမ်မသက်မှုများဖြစ်ပွားခဲ့။ အမေရိကန်သမ္မတရောက်ရှိနေခိုက် ဘာသာရေးဆန်သော အဓိကရုန်းနှင့် တင်းမာမှုများ ၅-ရက် ဆက်တိုက်ဖြစ်ပွား ~ Myanmar Online News
အိန္ဒိယအမျိုးသားလုံခြုံရေးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်က ဥပဒေကြောင်းအာမခံချက် ပေးပြီးသည့်တိုင် နယူးဒေလီ ၃-နေရာ၌ မငြိမ်မသက်မှုများဖြစ်ပွားခဲ့။ အမေရိကန်သမ္မတရောက်ရှိနေခိုက် ဘာသာရေးဆန်သော အဓိကရုန်းနှင့် တင်းမာမှုများ ၅-ရက် ဆက်တိုက်ဖြစ်ပွား
7:07 PM နိုင်ငံတကာသတင်း No comments
အိန္ဒိယနိုင်ငံ နယူးဒေလီ၏ နေရာ ၃- နေရာတွင် မီးရှို့ဖျက်ဆီးမှု၊ မငြိမ်သက်မှုသတင်းများဆက်လက် ထွက်ပေါ်ခဲ့ကြောင်း၊ မြို့တော်၏ အဓိကရုန်းဘေးဒါဏ်သင့် နယ်မြေများသို့ အိန္ဒိယအမျိုးသားလုံခြုံရေးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် အာဂျစ်ဒိုဗဲလ် ကိုယ်တိုင် ကွင်းဆင်းကြည့်ရှု့၍ အစိုးရက ငြိမ်ဝပ်ပိပြားရေးပြန်လည်ဆောင်ကျဉ်းပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း ပုဂ္ဂလိကအာမခံချက်ပေးခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း နာရီအနည်းငယ်အကြာ၌ဖြစ်သည်ဟု အိန္ဒိယ NDTV က ယနေ့ရေးသားသည်။
နိုင်ငံသာားဥပဒေသစ်ကို အကြောင်းပြုလျှက် လွန်ခဲ့သည့် တနင်္ဂနွေနေ့မှစတင်ကာ ၅-ရက်ဆက်တိုက် ရုန်းရင်းဆန်ခတ်မှုများတွင် အနည်းဆုံး ၃၅-ဦး အသက်ဆုံးရှုံး၍ လူ ၂၀၀ ကျော်ဒါဏ်ရာရရှိခဲ့ရသည်။ ဒေလီရဲတပ်ဖွဲ့ကမူ ရုန့်ရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်ပွားစဉ် အကြမ်းဖက်မှုများနှင့်ဆက်နွယ်သူ ၁၃၀-ဦးကိုဖမ်းဆီး၍ လူ ၄၈-ဦးကို အမှု့ဖွင့် စုံစမ်းလျှက်ရှိပြီး အခြေအနေအရပ်ကို ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုသည်။
နိုင်ငံသားဥပဒေသစ်ကို ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြပွဲများသည် အိန္ဒိယသို့ အမေရိကန်သမ္မတ ရောက်ရှိချိန် တနင်္လာ-အင်္ဂါနေ့များတွင် အဆိုးရွားဆုံးဖြစ်ခဲ့ပြီး ကန့်ကွက်-ထောက်ခံအုပ်စုနှစ်ဖက်အကြား အဓိကရုန်းများ ပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ဖြစ်စဉ်အား အသေးစိတ်စုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးနောက် လက်နက်ကိုင်အကြမ်းဖက်ရာ၌ ပါဝင်သူများ သည် WhatsApp အွန်လိုင်းပလက်ဖောင်း၏ Encrypted သတင်းများ ပေး-ယူပြုလုပ်၍ လူစုဝေးခြင်း-တိုက်ခိုက်ကြမည့် နေရာအမျိုးမျိုးတို့ကို ညွှန်ပြခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်ဟု ဒေလီရဲတပ်ဖွဲ့က ယနေ့ပြောဆိုသည်။
ယနေ့ နယူးဒေလီ အရှေ့မြောက်ပိုင်းတွင် ဆူပူသူများသည် လူစုလူဝေးမပြုလုပ်ရန် ရဲတပ်ဖွဲ့၏ တားမြစ်မိန့်များကို ဖီဆန်ကာ သံဒုတ်- သံချောင်းနှင့် သေနတ်တို့ကို ကိုင်ဆောင်လှည့်လည်လျှက်ရှိကြောင်း သတင်းများထွက်ပေါ်သည်။ မီးတင်ရှို့ခြင်း- နေထိုင်သူများအား ခြိမ်းခြောက်ခြင်း၊ လက်သရမ်းဖျက်ဆီးခြင်းများ ဆက်တိုက်ဖြစ် ပွားခဲ့သည်ဆို၏။
ဒေလီရဲတပ်ဖွဲ့သည် အကြမ်းဖက်မှုများဖြစ်ပွားနေစဉ် တစ်စုံတစ်ရာကာကွယ်တားဆီးခြင်း မရှိကြောင်း၊ ဆူပူမှုဖြစ်ပွားစေရန် လှုံဆော်ခဲ့သည့် အာဏာရ BJP ပါတီခေါင်းဆောင်များအား အမှု့ဖွင့် တရားစွဲဆိုရန် ပျက်ကွက်လျှက်ရှိသည်ဟု ပြင်းထန်စွာ ဝေဖန်ခြင်းခံရသည်။
နိုင်ငံသားဥပဒေသစ်ကို ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြသည့် မိန်းမအများစုပါဝင်သော မွတ်စလင်များအား ဟိန္ဒူဆူပူသူများက တားဆီးဆန့်ကျင်ရာမှ ဆယ်စုနှစ်များအတွင်း အပြင်းထန်ဆုံး ဘာသာရေးအဓိကရုန်းများဖြစ်ပွားခဲ့သည်ဟု Guardian က ယမန်နေ့ရေးသားသည်။ နယူဒေလီအရှေ့မြောက်ပိုင်းတွင် မွတ်စလင်များ နေအိမ်မှ ထွက်ပြေးကြရပြီး ဟိန္ဒူဆူပူသူများက မော်တော်ယာဉ်နှင့် အဆောက်အအုံများအား မီးတင်ရှို့၍ ဗလီများကို ဖျက်ဆီးကြောင်း သတင်းဖော်ပြသည်။
အိန္ဒိယပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး အမစ်ရှားသည် အဓိကရုန်းများအား တားဆီးရန် တာဝန် ပေါ့လျှော့ခဲ့ပြီး အထူးသဖြင့် အရှေ့မြောက်နယ်မြေ BJP ပါတီခေါင်းဆောင် Kapil Mishra ကပီမစ်ရှရာ၏ ပြင်းထန်သော မိန့်ခွန်းများနှင့် ရာဇသံများကြောင့် နောက်ဆက်တွဲ ဆိုးရွားသော အကြမ်းဖက်မှုများဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရသည်ဟု New York Times က ယနေ့ ရေးသားသည်။
ဇာတ်မြင့်ဟိန္ဒိူနိုင်ငံရေးမိသားစုမှ ဆင်းသက်သည့် ကပီမစ်ရှရာသည် မကြာသေးမီက MLA ခေါ် ဒေလီဥပဒေပြုညီလာခံ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပူပူနွေးနွေး မဲရှုံးထားသူဖြစ်သည်။ ယခင်က AAP ပါတီဝင်ဖြစ်ခဲ့သော မစ်ရှရာသည် ၂၀၁၉-ခုနှစ်တွင် လက်ရှိအာဏာရ BJP ပါတီသို့ ကူးပြောင်းခဲ့ပြီးနောက် တက်ကြွသော နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာသည်။
၎င်းသည် Amnesty International ( AI ) ခေါ် နိုင်ငံတကာလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်အဖွဲ့နှင့် Green Peace ခေါ် မြစိမ်းရောင် သဘာပတ်ဝန်းကျင်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့တွင် အလုပ်လုပ်ခဲ့သူဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
ကပီမစ်ရှရာသည် လမ်းပိတ်ဆို့ဆန္ဒပြလျှက်ရှိသော နိုင်ငံသားဥပဒေသစ်ဆန့်ကျင်သူများကို ရဲတပ်ဖွဲ့က အချိန်မီ ရှင်းလင်းခြင်းမပြုလျှင် မိမိတို့ ဟိန္ဒူအမျိုးသာရေးဝါဒီတို့ဖာသာ အရေးယူဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရာဇသံပေး၍ ခက်ထန်သော မိန့်ခွန်းများ ဟောပြောခဲ့သည်။
နာရီအနည်းငယ်အကြာတွင် ဟိန္ဒူနှင့် မွတ်စလင်တို့အကြား အကြမ်းဖက်မှုများဖြစ်ပေါ်လာရသည်။ အုပ်စုဖွဲ့ကာ တစ်ဖက်နှင့်တစ်ဖက် အုတ် ခဲ-ကျောက်တုံးများဖြင့် ပစ်ပေါက်ကြပြီး ဒုတ်-ဒါးများကိုင်ဆောင်လျှက် ပြင်းထန်စွာတိုက်ခိုက်ခြင်း၊ ဈေးဆိုင်များအား မီးတင်ရှို့ခြင်းတို့ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။
အဓိကရုန်းများအတွင် သေဆုံး-ဒါဏ်ရာရသူများမှာ သေနတ်ကျည်နှင့် ကျောက်ခဲထိမှန်ခြင်း၊ ပြတ်ရှ-ထိုးသွင်း ဒါးဒါဏ်ရာရရှိသူများဖြစ်ကြောင်း ဆေးရုံနှင့် ဆေးဝါးကုသရေးဆိုင်ရာတို့က ပြောဆိုသည်။
Source : NDTV., February 27, 2020, “Unrest Again In Delhi, 27 Killed In Clashes Since Sunday: 10 Updates.
Ref : HtayOung / OungMarine
အိန်ဒိယအမိုးသားလုံခွုံရေးအကွံပေးပုဂ်ဂိုလ်က ဥပဒေကွောငျးအာမခံချကျ ပေးပွီးသည့်တိုငျ နယူးဒလေီ ၃-နရော၌ မငွိမ်မသက်မှုများဖြစ်ပွားခဲ့။ အမေရိကနျသမ်မတရောကျရှိနခေိုကျ ဘာသာရေးဆနျသော အဓိကရုနျးနှငျ့ တငျးမာမှုများ ၅-ရကျ ဆက်တိုကျဖြစ်ပွား
Friday ,. February 28 , 2020
အိန်ဒိယနိုငျငံ နယူးဒလေီ၏ နရော ၃- နရောတွငျ မီးရှို့ဖျက်ဆီးမှု၊ မငွိမျသက်မှုသတငျးများဆက်လကျ ထွကျပေါျခဲ့ကွောငျး၊ မွို့တောျ၏ အဓိကရုနျးဘေးဒါဏျသငျ့ နယျမြေများသို့ အိန်ဒိယအမိုးသားလုံခွုံရေးအကွံပေးပုဂ်ဂိုလျ အာဂျစ်ဒိုဗဲလျ ကိုယ်တိုငျ ကွငျးဆငျးကွညျ့ရှု့၍ အစိုးရက ငွိမျဝပ်ပြိပားရေးပြန်လညျဆောင်ကျဉျးပေးမညျ ဖြစျ ကွောငျး ပုဂ်ဂလိက အာမခံချကျပေးခဲ့ပွီးနောက်ပိုငျး နာရီအနညျးငယျအကွာ၌ဖြစျသညျဟု အိန်ဒိယ NDTV က ယနေ့ရေးသားသညျ။
နိုငျငံသာားဥပဒေသစ်ကို အကွောငျးပြုလျှကျ လွန်ခဲ့သညျ့ တနငျ်ဂနွေနေ့မှစတင်ကာ ၅-ရက်ဆက်တိုကျ ရုနျးရငျးဆန်ခတ်မှုများတွငျ အနညျးဆုံး ၃၅-ဦး အသက်ဆုံးရှုံး၍ လူ ၂၀၀ ကေျ်ဒာါဏျရာရရှိခဲ့ရသညျ။ ဒလေီရဲတပ်ဖွဲ့ကမူ ရုနျ့ရငျးဆန်ခတျဖြစ်ပွားစဉျ အကွမျးဖက်မှုများနှင့်ဆက်နွယျသူ ၁၃၀-ဦးကိုဖမျးဆီး၍ လူ ၄၈-ဦးကို အမှု့ဖွငျ့ စုံစမျးလျှကျရှိပွီး အြခေအနေအရပ်ကို ထိနျးချုပ်နိုငျပြွီဖစျကွောငျး ပြောဆိုသညျ။
နိုငျငံသားဥပဒေသစ်ကို ကန့်ကက်ဆွန်ဒပြပွဲများသညျ အိန်ဒိယသို့ အမေရိကနျသမ်မတ ရောကျရှိခိနျ တနငျ်လာ-အငျ်ဂါနေ့များတွငျ အဆိုးရွားဆုံးဖြစ်ခဲ့ပွီး ကန့်ကွကျ-ထောက်ခံအုပ်စုနှစ်ဖကျအကွား အဓိကရုနျးများ ပြငျးထန်စွာဖြစ်ပွားခဲ့သညျ။ ဖြစ်စဉျအား အသေးစိတ်စုံစမျးစစျဆေးပွီးနောကျ လက်နက်ကိုငျအကွမျးဖကျရာ၌ ပါဝငျသူများ သညျ WhatsApp အွန်လိုငျးပလကျဖောငျး၏ Encrypted သတငျးများ ပေး-ယူပြုလုပျ၍ လူစုဝေးခြငျး-တိုက်ခိုကျကွမညျ့ နရောအမိုးမိုးတို့ကို ညှှနျပြခြငျးများ ပြုလုပ်ခဲ့ကွသညျဟု ဒလေီရဲတပ်ဖွဲ့က ယနေ့ပြောဆိုသညျ။
ယနေ့ နယူးဒလေီ အရှေ့မြောက်ပိုငျးတွငျ ဆူပူသူများသညျ လူစုလူဝေးမပြုလုပျရနျ ရဲတပ်ဖွဲ့၏ တားမြစ်မိန့်များကို ဖီဆန်ကာ သံဒုတျ- သံခေျာငျးနှငျ့ သနေတ်တို့ကို ကိုငျဆောင်လှည့်လည်လျှကျရှိကွောငျး သတငျးများထွကျပေါျသညျ။ မီးတငျရှို့ခြငျး- နထေိုငျသူများအား ခွိမျးခြောကျခြငျး၊ လကျသရမျးဖျက်ဆီးခြငျးများ ဆက်တိုကျဖြစျ ပွားခဲ့သည်ဆို၏။
ဒလေီရဲတပ်ဖွဲ့သညျ အကွမျးဖက်မှုများဖြစ်ပွားနစေဉျ တစ်စုံတစျရာကာကွယ်တားဆီးခြငျး မရှိကွောငျး၊ ဆူပူမှုဖြစ်ပွားစရေနျ လှုံဆ်ခောဲ့သညျ့ အာဏာရ BJP ပါတီခေါငျးဆောင်များအား အမှု့ဖွငျ့ တရားစွဲဆိုရနျ ပျက်ကွက်လျှကျရှိသညျဟု ပြငျးထန်စွာ ဝဖေနျခြငျးခံရသညျ။
နိုငျငံသားဥပဒေသစ်ကို ကန့်ကက်ဆွန်ဒပြသညျ့ မိနျးမအများစုပါဝငျသော မွတ်စလင်များအား ဟိန်ဒူဆူပူသူများက တားဆီးဆန့်ကျငျရာမှ ဆယ်စုနှစ်များအတွငျး အပြငျးထန်ဆုံး ဘာသာရေးအဓိကရုနျးများဖြစ်ပွားခဲ့သညျဟု Guardian က ယမနျနေ့ရေးသားသညျ။ နယူဒလေီအရှေ့မြောက်ပိုငျးတွငျ မွတ်စလင်များ နအေိမ်မှ ထွကျပြေးကွရပွီး ဟိန်ဒူဆူပူသူများက မောျတောျယာဉ်နှငျ့ အဆောကျအအုံများအား မီးတငျရှို့၍ ဗလီများကို ဖျက်ဆီးကွောငျး သတငျးဖောျပြသညျ။
အိန်ဒိယပြည်ထဲရေးဝနျကွီး အမစျရှားသညျ အဓိကရုနျးများအား တားဆီးရနျ တာဝနျ ပေါ့လှေျာ့ခဲ့ပွီး အထူးသဖြငျ့ အရှေ့မြောက်နယျမြေ BJP ပါတီခေါငျးဆောငျ Kapil Mishra ကပီမစျရှရာ၏ ပြငျးထနျသော မိန့်ခွနျးများနှငျ့ ရာဇသံများကွောငျ့ နောက်ဆက်တွဲ ဆိုးရွားသော အကွမျးဖက်မှုများဖြစျပေါျခဲ့ရသညျဟု New York Times က ယနေ့ ရေးသားသညျ။
ဇာတျမြငျ့ဟိန်ဒိူနိုငျငံရေးမိသားစုမှ ဆငျးသကျသညျ့ ကပီမစျရှရာသညျ မကွာသေးမီက MLA ခေါျ ဒလေီဥပဒေပြုညီလာခံ ရွေးကောက်ပွဲတွငျ ပူပူနွေးနွေး မဲရှုံးထားသူဖြစျသညျ။ ယခင်က AAP ပါတီဝငျဖြစ်ခဲ့သော မစျရှရာသညျ ၂၀၁၉-ခုနှစ်တွငျ လကျရှိအာဏာရ BJP ပါတီသို့ ကူးပြောငျးခဲ့ပွီးနောကျ တကျွကွသော နိုငျငံရေးခေါငျးဆောငျဖြစ်လာသညျ။
၎င်းငျးသညျ Amnesty International ( AI ) ခေါျ နိုငျငံတကာလွတျငွိမျးချမျးသာခွငျ့အဖွဲ့နှငျ့ Green Peace ခေါျ မြစိမျးရောငျ သဘာပတျဝနျးကျငျးထိနျးသိမျးရေးအဖွဲ့တွငျ အလုပ်လုပ်ခဲ့သူဖြစျကွောငျး သိရှိရသညျ။
ကပီမစျရှရာသညျ လမျးပိတ်ဆို့ဆန်ဒပြလျှကျရှိသော နိုငျငံသားဥပဒေသစ်ဆန့်ကျငျသူများကို ရဲတပ်ဖွဲ့က အခိန်မီ ရှငျးလငျးခြငျးမပြုလျှငျ မိမိတို့ ဟိန်ဒူအမိုးသာရေးဝါဒီတို့ဖာသာ အရေးယူဆောငျရက်မွညျဖြစျကွောငျး ရာဇသံပေး၍ ခက်ထနျသော မိန့်ခွနျးများ ဟောပြောခဲ့သညျ။
နာရီအနညျးငယျအကွာတွငျ ဟိန်ဒူနှငျ့ မွတ်စလင်တို့အကွား အကွမျးဖက်မှုများဖြစျပေါျလာရသညျ။ အုပ်စုဖွဲ့ကာ တစ်ဖက်နှင့်တစ်ဖကျ အုတျ ခဲ-ကေျာက်တုံးများဖြငျ့ ပစျပေါကျကွပွီး ဒုတျ-ဒါးများကိုငျဆောင်လျှကျ ပြငျးထန်စွာတိုက်ခိုကျခြငျး၊ စေျးဆိုင်များအား မီးတငျရှို့ခြငျးတို့ပြုလုပ်ခဲ့ကွသညျ။
အဓိကရုနျးများအတွငျ သဆေုံး-ဒါဏျရာရသူများမှာ သနေတ်ကျည်နှငျ့ ကေျာက်ခဲထိမှနျခြငျး၊ ပြတျရှ-ထိုးသွငျး ဒါးဒါဏျရာရရှိသူများဖြစျကွောငျး ဆေးရုံနှငျ့ ဆေးဝါးကုသရေးဆိုငျရာတို့က ပြောဆိုသညျ။